Mountain TV || लण्डनमा आतंकवादी आक्रमण, प्रधानमन्त्री मेले गरिन् भत्सर्ना
लण्डनमा आतंकवादी आक्रमण, प्रधानमन्त्री मेले गरिन् भत्सर्ना
Tweet काठमाडौं । बेलायतको राजधानी लण्डनमा आतंककारी आक्रमण भएको छ ।
वेष्टमिनिस्टरमा रहेको संसद भवन नजिक भएको आक्रमणमापरि प्रहरी अधिकारीसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक महिलासहित तीन जना सर्वसाधारण छन् । यस्तै प्रहरीको गोली लागेर एक जना आक्रमणकारीको पनि मृत्यु भएको बिबिसीले जनाएको छ । घटनामा कम्तिमा ४० जना घाइते भएका छन् ।
कारमा आएका आक्रमणकारीले वेष्टमिनिस्टर ब्रिजमा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको र त्यसपछि संसद भवन नजिक गएर त्यहाँ रहेका प्रहरी अधिकारीलाई चक्कुले आक्रमण गरेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । त्यसपछि प्रहरीले आक्रमणकारीलाई गोली प्रहार गरेका थिए ।
घाइते हुनेमा तीन जना प्रहरी अधिकारी पनि रहेको र दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको लण्डन महानगरीय प्रहरीका कार्यवाहक उपायुक्त मार्क रोलीले बताए । आक्रमणकारीको परिचय अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले आक्रमणको निन्दा गरेकी छन् ।
राजधानीको मुख्य भागमा गरिएको आक्रमण बेलायती मान्यतालाई टुक्र्याउने उद्देश्यले भएको र आफूहरु त्यसलाई कहिल्यै सफल हुन नदिने प्रधानमन्त्री मेले बताएकी छन् ।
लण्डनमा अहिले सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ र आतंककारी विरुद्ध कारवाही अभियान चलिरहेको छ ।
4 months ago | अन्तराष्ट्रिय कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला! Top News 1
अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु फाल्गुन-९-२०७३
ट्रम्पको मोदी नजर, अमेरिकामा निम्तो, दक्षिण एसियालाई के फाइदा ? माघ-११-२०७३